Time Traveller Girl (mmsub)
by CHANNEL+ November 15, 2020
(21+) Time Traveller Girl မွနျမာစာတနျးထိုး
📌 မဒေါငျးခငျြသူမြား လငျ့ထဲမှာ
(၁၈ နှဈအောကျ လုံးဝ မကွညျ့ရ)
ပထမတခါတငျပေးတဲ့ အခြိနျရပျတနျ့စကျဇာတျလမျးကို နှဈသကျတယျဆိုလို့ နောကျထပျတဈပုဒျတငျဆကျလိုကျပွီဗြာ...ဇာတျလမျးအညှနျး‌ကတော့ ရထားပျေါမှာ ကောငျမလေး ၅ယောကျလောကျကို နှိုကျမွညျးတဲ့ကြျောကွီးဟာတရားစှဲ့ခံခဲ့ရပါတယျ.
အဲ့ဒါနဲ့ တရားရုံးမှာ အမှုရငျဆိုငျခဲ့ရတာပေါ့ဗြာ.ဒါပမေယျလညျး အဲ့လိုအမှုတှကေို လိုကျပေးတဲ့ နာမညျကွီးရှနေ့မေလေး မိဇငျကွီး က ကြျောကွီးကို ဂရုဏာသကျပွီး အမှုကိုလိုကျပေးခဲ့ပါတယျ. တရားရုံးမှာ စုံထောကျတှကေ ကြျောကွီးရဲ့လူကွီးကစားစရာတှနေဲ့ သကျသပွေ‌ခဲ့ပမေယျ့လဲ ရှနေ့မေလေး မိဇငျကွီး ရဲ့ လြှို့ဝှကျသိုငျးကှကျဖွဈတဲ့ အခြိနျရပျတနျ့စကျကွောငျ့ မပွနိုငျခဲ့ပါဘူး.
ကြျောကွီးနဲ့ရှနေ့မေလေး မိဇငျကွီး တို့ နှဈယောကျပေါငျးပီ့း တရားသူကွီး ကြျောကွီးကို သဘောကပြွီး အမှုနိုငျအောငျ လုပျရငျးနဲ့ တရားသူကွီးမကလဲ ကြျောကွီးကို သဘောကြ ရှနေ့မေလေး မိဇငျကွီး ကလဲ စုံထောကျကွီးကို သဘောကပြွီး တရားရုံးထဲမှာတငျ အခဈြနာလနျထသိုငျးတှေ ထခကြွတာ ပှဲကွီးပှဲကောငျးတှေ ဖွဈကုနျတာပေါ့ဗြာ
ဘယျလိုသိုငျးကှကျတှကွေောငျ့ ‌တရားသူကွီးမက ကြျောကွီးကို ကွှသှေားလဲဆိုတာ ဆငျဆာမပါ ပွောငျပွောငျရှငျးရှငျး ကွညျ့ရှူအားပေးလိုကျကွပါဦးဗြာ….ဒီတဈခါတော့ အိုကွီး အိုမတှေ ရှောငျပွီး အလနျးလေးတှပေါတာ တငျဆကျထားပါတယျ ကြျောကွီး နဲ့ ရောငျးရငျးမြား အပွငျ အလနျးလေး မိဇငျကွီးကိုပါ ထညျ့ပေးထားပါတယျ
ဒါရိုကျတာ အုပျကွီးက အကောငျးဆုံးတငျဆကျထားပါတယျ သိုငျးပေါငျးစုံ အကှကျတှနေဲ့ ဆုပေါငျးမြားစှာရထားတဲ့ ဇတျလမျးကို အခုပဲ နှားနို့သောကျရငျး ကွညျ့လိုကျကွပါစို့
(21+) Time Traveller Girl မြန်မာစာတန်းထိုး
📌 မဒေါင်းချင်သူများ လင့်ထဲမှာ
(၁၈ နှစ်အောက် လုံးဝ မကြည့်ရ)
ပထမတခါတင်ပေးတဲ့ အချိန်ရပ်တန့်စက်ဇာတ်လမ်းကို နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်တင်ဆက်လိုက်ပြီဗျာ...ဇာတ်လမ်းအညွှန်း‌ကတော့ ရထားပေါ်မှာ ကောင်မလေး ၅ယောက်လောက်ကို နှိုက်မြည်းတဲ့ကျော်ကြီးဟာတရားစွဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်.
အဲ့ဒါနဲ့ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ.ဒါပေမယ်လည်း အဲ့လိုအမှုတွေကို လိုက်ပေးတဲ့ နာမည်ကြီးရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး က ကျော်ကြီးကို ဂရုဏာသက်ပြီး အမှုကိုလိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်. တရားရုံးမှာ စုံထောက်တွေက ကျော်ကြီးရဲ့လူကြီးကစားစရာတွေနဲ့ သက်သေပြ‌ခဲ့ပေမယ့်လဲ ရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး ရဲ့ လျှို့ဝှက်သိုင်းကွက်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ရပ်တန့်စက်ကြောင့် မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး.
ကျော်ကြီးနဲ့ရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး တို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပီ့း တရားသူကြီး ကျော်ကြီးကို သဘောကျပြီး အမှုနိုင်အောင် လုပ်ရင်းနဲ့ တရားသူကြီးမကလဲ ကျော်ကြီးကို သဘောကျ ရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး ကလဲ စုံထောက်ကြီးကို သဘောကျပြီး တရားရုံးထဲမှာတင် အချစ်နာလန်ထသိုင်းတွေ ထချကြတာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ
ဘယ်လိုသိုင်းကွက်တွေကြောင့် ‌တရားသူကြီးမက ကျော်ကြီးကို ကြွေသွားလဲဆိုတာ ဆင်ဆာမပါ ပြောင်ပြောင်ရှင်းရှင်း ကြည့်ရှူအားပေးလိုက်ကြပါဦးဗျာ….ဒီတစ်ခါတော့ အိုကြီး အိုမတွေ ရှောင်ပြီး အလန်းလေးတွေပါတာ တင်ဆက်ထားပါတယ် ကျော်ကြီး နဲ့ ရောင်းရင်းများ အပြင် အလန်းလေး မိဇင်ကြီးကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်
ဒါရိုက်တာ အုပ်ကြီးက အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ထားပါတယ် သိုင်းပေါင်းစုံ အကွက်တွေနဲ့ ဆုပေါင်းများစွာရထားတဲ့ ဇတ်လမ်းကို အခုပဲ နွားနို့သောက်ရင်း ကြည့်လိုက်ကြပါစို့
Credit - darkside